BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/20/20140အကြံပြုခြင်း
No.445 Sunday, July 20, 2014
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေးလက်မှတ် ကောက်ခံရာတွင် စာရင်းပိတ် သည့် ဇူလိုင် ၁၉ ရက်၌ စုစု ပေါင်းလက်မှတ် ငါးသန်းကျော် ရရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်အနေဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေးအတွက် လက်မှတ်ကောက်ခံခြင်းကို မေ လ ၂၇ ရက်တွင် စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ ပြီး ဇူလိုင် ၁၉ ရက်တွင် အပြီး သတ်မှတ်ထားခဲ့သည်။
‘‘ဒီနေ့ရုံးချုပ်မှာ စာရင်း ပေါင်းတာ ငါးသန်းကျော်ရတယ် လို့ပြောတယ်။ ငါးသန်းကျော်ရ တာမနည်းပါဘူး’’ဟု အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြောရေးဆို ခွင့်ရှိသူ ဗဟိုကော်မတီဝင် ဒေါ် နန်းခင်ထွေးမြင့်ကပြောသည်။
တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်အသီးသီး မှ တက်ရောက်လာကြသော စာ ရင်းများကို ပေါင်းကြည့်ရာတွင် အကြမ်းဖျင်း ငါးသန်းကျော်ရရှိ ထားပြီး လာမည့်နှစ်ပတ်အတွင်း စာရင်းအတိအကျ ထုတ်ပြန် ပေးသွားမည်ဟု NLD ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝင်း ထိန်ကပြောသည်။
ရရှိသည့် လက်မှတ်များကို နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ လွှတ်တော်နှင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့ထံသို့ တင်ပြသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများကိုတော့ အာဇာနည်ဗိမာန်မှာ လာရောက်အလေးမပြုနိုင်တဲ့
ဦးသိန်းစိန်၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့သူရဲကောင်းဗိမာန်မှာတော့ ပန်းခွေချအလေးပြုနိုင်ခဲ့လေရဲ့ ။
အာဇာနည်နေ.မှာ ဟွန်းတီးပြီးအလေးပြုလို. လိုင်စင်အဖမ်းခံရတာဂုဏ်ယူတယ်
လိုင်စံသိမ်းခံရသူ ကိုငြိမ်းမင်းသူကို မီဒီယာတစ်ဦးကမေးတယ်။
" လိုင်စင်သိမ်းခံရတဲ့အတွက် ဘယ်လိုခံစားရလဲ " တဲ့။ သူက
" ကျနော် ကျေနပ်တယ်။ ဂုဏ်ယူတယ်။ လိုင်စင်ဆိုတာ ပြန်လျှောက်လို့ရပါတယ်။
ဝမ်းမနည်းပါဘူး။ အာဇာနည်တွေကို ဟွန်းတီးပြီး အလေးပြုလိုက်ရတဲ့အတွက်
ကျနော် ဝမ်းသာပါတယ် " လို့ပြန်ဖြေသွားတယ်။
ဖြစ်စဉ်မှာ လှည်းတန်မီးပွိုင့်တွင် ဟွန်းတီးအလေးပြုနေသည့် ယာဉ်မောင်းကိုငြိမ်းမင်းသူ
အား ကမာရွတ်မြို့နယ်ယာဉ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့မှ သုံးပွင့်ရာထူးရှိသည့် ယာဉ်ထိန်းရဲအရာရှိ
ပြည်သူများအနေဖြင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရမှပင် အာဇာနည်နေ.ကို ဥသြစွဲပေးခြင်းအပြင်
မီးသတ်ယာဉ်များဖြင့်တောင် ဥသြစွဲပေးနေချိန်တွင် ယခုကဲ့သို. လုပ်ဆောင်ခြင်း
အပေါ် မေးခွန်းထုတ်စရာများဖြစ်နေပေသည်။ မနလေးတိုင်းတွင်မူ လမ်းပန်းဆက်သွယ်
ရေးဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်းကိုယ်တိုင်မှ ကား၊မော်တော်ဆိုင်ကယ်များဖြင့် ဟွန်းတီး
သတင်းဓါတ်ပုံ- Ya Minn Eain.